News - kpaliri Line
Site na mmepe nke teknụzụ na-aga n'ihu, ahịrị galvanized n'afọ ndị na-adịbeghị anya nwere mmepe ọhụrụ, Galvanized line ntoputa nke ikpo ọkụ ọkụ na-eweghachi usoro, na ụfọdụ usoro mmepụta.
Igwe ọkụ na-enwu ọkụ nke na-enwu ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ, mmanụ ọkụ nke ọkụ na-enwu ọkụ na-enwete mgbe ọkụ ọkụ si na njedebe nke radiant tube site na onye na-ekpo ọkụ ọkụ ikuku mgbe ọpụpụ, oge a ka enwere nnukwu ikuku anwụrụ ọkụ, na otutu okpomoku. Ahịrịl Galvanized Iji jiri ike ọkụ mee ihe n'ụzọ zuru oke, yana ike oriri nke otu ụlọ ọrụ, na sistemụ ọkụ ọkụ na pipeline na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na onye na-ekpo ọkụ mmiri ọkụ, n'otu n'otu, ahịrị galvanized maka nhichapu mmiri, mmiri na-agwụ , kpo oku ikuku oku akpo ma kpoo ngalaba nhicha nke lye. Site na mgbake nke ikuku anwụ na-ekpo ọkụ, nwere ike belata usoro niile maka nhicha na ihicha ọkụ nke uzuoku ma ọ bụ oriri eletrik, belata mmefu mmepụta, ebe ịbelata ọkụ ọkụ.
Okpukpo a na-agbadata na ọkpụrụkpụ achọrọ maka akụrụngwa galvanized. Galvanized akara Cold Rolling bụ ihe kasị nkịtị otu-guzoro reversible Roll na nkume igwe nri na oyi na-atụ na-aga n'ihu Rolling mmepụta akara. Na otu nkwụghachi ihe ntụgharị na-agagharị na igwe na-agagharị na ọtụtụ oge, nke mere na ọkpụrụkpụ nke nchara ígwè ji nwayọọ nwayọọ na-adị. Na-aga n'ihu oyi Rolling mmepụta akara, nchara warara e nọgidere akpọrepu ka chọrọ ọkpụrụkpụ site a set nke ọtụtụ Rolling igwe.
Galvanizing: galvanizing bụ a na-ekpo ọkụ akpọrepu eriri igwe, oyi akpọrepu eriri igwe elu usoro ọgwụgwọ. Kachasị oyi bụ oyi ugbu a
Kpaliri kpaliri mpempe akwụkwọ, na akụrụngwa mgbe ọkụ Rolling mgbe pickling na oyi na-atụ Rolling nhazi. Ya mere, ọkpụrụkpụ ahụ dị ntakịrị, ma elu ahụ na-adị ire ụtọ karị, iji kwado ọtụtụ ojiji. Ejiri Galvanized Mana site na mmepe nke teknụzụ akụ na ụba, ọtụtụ oge chọrọ nnukwu mpempe akwụkwọ. Ọ bụrụ na ihe ndị a chọrọ ka elu adịghị elu, ị nwere ike iji efere akpọrọ ọkụ kpoo ọkụ. -Kpụrụ mpempe akwụkwọ a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ n'ozuzu 2-4mm, obosara nke 1000-1600mm, na ebe mkpuchi mpempe akwụkwọ oyi na-atụgharị adịghị oke, yabụ ntụgharị ahụ esighi ike.
Gbanye usoro galvanizing ọnụ, ahịrị kpaliri n'otu usoro mmepụta na mmepụta nke usoro abụọ, ọ bụghị naanị ịchekwa usoro ahụ, kamakwa iji mepụta mpempe akwụkwọ kachasị mma, ahịrị kpaliri nke bụ usoro ntanetị na ntanetị, aha ya bụ usoro Senjimir. Oghere ọkụ Sengmiri na-ekpo ọkụ nwere ihe abụọ dị iche iche, nke a na-ekpo ọkụ na 450 Celsius C na ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ iji wepu griiz site na warara ahụ na nchara nchara ígwè na-ekpo ọkụ. Ma nchara ahụ n'ime ọkụ Mbelata iji nọgide na-ekpo ọkụ ruo 700-800 ℃, iji mezue annealing recrystallization, na-ebelata gas ammonia decomposition gas iji weghachi elu nke ihe nkiri oxide ma gbochie ịgbanye ọla nchara. N'ikpeazụ, a na-eme ka eriri ígwè ahụ dị 480 Celsius C ma banye na ite zinc. Nhazi nke teknụzụ ọkụ na-ekpo ọkụ bụ ihe ndabere nke teknụzụ na-ekpo ọkụ ọkụ nke oge a, nke mere na obosara nke ngwaahịa ahụ ruru 1m na usoro mmepụta ihe ruru 90m / min. Steel elu agaghịkwa eji nwekwara, na okpomọkụ na zinc ngwọta na-agbanwe agbanwe, kpaliri akara nke mere na okpomọkụ nke zinc ite, mfe ịchịkwa ego nke aluminom, a ọkpụrụkpụ abawanye na ngwaahịa mma.